လီ​ဗာပူးနဲ့ ချန်​ပီယံမှာ ​ရေစက်​ပြန်​ဆုံ​နေတဲ့ အ​ပေါ် မှတ်​ချက်​ပေးလိုက်​တဲ့ အန်​ဆယ်​​လော့တီ​ ၊ ကူလီဘာလီ နဲ့ ဂူလမ်​ - SPORTS MYANMAR
လီ​ဗာပူးနဲ့ ချန်​ပီယံမှာ ​ရေစက်​ပြန်​ဆုံ​နေတဲ့ အ​ပေါ် မှတ်​ချက်​ပေးလိုက်​တဲ့ အန်​ဆယ်​​လော့တီ​ ၊ ကူလီဘာလီ နဲ့ ဂူလမ်​
မန်​​နေဂျာ ကာလိုအန်​ဆယ်​​လော့တီက နာပိုလီ အတွက်​ ဒီရာသီ ချန်​ပီယံလိဂ်​ draw ဟာ မနှစ်​ကထက်​ စာရင်​​တော့ ပို​ကောင်းတယ်​လို့ ဝန်​ခံလိုက်​​ပေမယ့်​ ဒီရာသီ ကလည်း ခက်​ခဲတဲ့ အုပ်​စုအဖြစ်​ ရှိ​နေဆဲလို့ ဆိုလိုက်​ပါတယ်​။ ​နေပယ်​ကလပ်​ဟာ ဒီနှစ်​မှာလည်း ချန်​ပီယံလိဂ်​ဖလားဆုရှင်​ လီ​ဗာပူး အသင်းနဲ့ အုပ်​စုအဆင့်​မှာ ပြန်​လည်​​တွေ့ဆုံ​နေပြီး ဒီတစ်​ကြိမ်​မှာ​တော့ သြစတီးယား ကလပ်​ ရက်​ဘူးဆဲလ်​ဘတ်​ ၊ ဘယ်​ဂျီယံကလပ်​ ဂန့်​ တို့ ပါဝင်​​နေပါတယ်​။
အန်​ဆယ်​​လော့တီ​ က “ဒီတစ်​ကြိမ်​ မဲခွဲမှုဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်​ကထက်​​တော့ ပို​ကောင်းပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒါဟာ ခက်​ခဲတဲ့ အုပ်​စု အဖြစ်​ ရှိ​နေဆဲပါ။ ကျွန်​​တော်​တို့ ယုံကြည်​မှု ရှိပါတယ်​။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
နာပိုလီ ​နောက်​ခံလူ ကာလီဒူ ကူလီဘာလီ နဲ့ ဖာအိုဇီဂူလမ်​ တို့က သူတို့ဟာ ချန်​ပီယံလိဂ်​ အုပ်​စု E က​နေ ​နောက်​တဆင့်​ကို တက်​​ရောက်​ဖို့ အတွက်​ ခက်​ခဲတဲ့ စိန်​​ခေါ်မှုနဲ့ ရင်​ဆိုင်​​နေရတယ်​လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။ ကူလီဘာလီ ဟာ သူ့ရဲ့ အသင်း​ဟောင်းနဲ့ ပြန်​လည်​ ဆုံ​တွေ ရမှာ ဖြစ်​သလို လီ​ဗာပူး နဲ့လည်း အုပ်​စု အဆင့်​မှာ ၂နှစ်​ဆက်​တိုက်​ အတူတူကျ​နေပါတယ်​။
လီ​ဗာပူး နဲ့ လာမည့်​ စက်​တင်​ဘာလ ၁၇ရက်​​နေ့ ​နေပယ်​မှာ ကစားရမယ့်​ ပွဲမတိုင်​မီ ကူလီဘာလီ နဲ့ ဂူလမ်​တို့က နာပိုလီဟာ အဆင်​သင့်​ ဖြစ်​​နေမှာ ဖြစ်​ပြီိး ဘယ်​ပြိုင်​ဘက်​ကိုမှ မ​ကြောက်​ဘူးလို့ ကြုံးဝါးလိုက်​ပါတယ်​။
ဂူလမ်​က “ခက်​ခဲတဲ့ ပြိုင်​ဘက်​​တွေပါ။ ကျွန်​​တော်​တို့ သူတို့ကို ​လေးစားမှု အပြည့်​နဲ့ ယှဉ်​ပြိုင်​သွားမှာ ဖြစ်​​ပေမယ့်​လည်း ​ကြောက်​ရွံ့​နေမှာ​တော့ မဟုတ်​ပါဘူး။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
ကူလီဘာလီ က ” ချန်​ပီယံလိဂ်​ ပြိုင်​ပွဲဟာ တကယ့်​ကို အနှိုင်းမဲ့ ပြိုင်​ပွဲ တစ်​ခုပါပဲ။ ခက်​ခဲတဲ့ ပြိုင်​ဘက်​ အသင်း​တွေက ကျွန်​​တော်​တို့ကို ​စောင့်​​မျှော်​​နေကြ ပါတယ်​။ ဒါ​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော်​တို့ ဒီအသင်း ​တွေနဲ့ ရင်​ဆိုင်​သွားဖို့ အတွက်​ အဆင်​သင့်​ ဖြစ်​​နေမှာ ဖြစ်​ပါတယ်​။ ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ အသင်း​ဟောင်း ဖြစ်​တဲ့ ဂန့်​နဲ့ ပြန်​လည်​ ဆုံ​တွေ့ရ​တော့မှာ ဖြစ်​တာ​ကြောင့်​ ကျွန်​​တော့်​ အတွက်​ က​တော့ တကယ့်​ကို စိတ်​လှုပ်​ရှား စရာ ပါပဲ။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်​။
လီ​ဗာပူး မန်​​နေဂျာ ယာဂန်​က​လော့ က​တော့ နာပိုလီ နဲ့ ပြန်​​တွေ့တဲ့ အ​ပေါ် “နာပိုလီ ထပ်တွေ့ပြန်ပါပြီ! ကျွန်တော်တို့ နာပိုလီနဲ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် ကစားခဲ့ပြီးပြီးလဲ ဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အရမ်းကို အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ အသင်းဆိုတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
Liverpool’s Dutch midfielder Georginio Wijnaldum (C) shoots but fails to score during the UEFA Champions League group C football match between Liverpool and Napoli at Anfield stadium in Liverpool, north west England on December 11, 2018. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
သူတို့ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အသင်း မဟုတ်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ တကယ်ကောင်းတဲ့ အသင်းပါ။ ကာလိုဟာ တကယ့်ကို အတွေ့အကြုံ ကြွယ်ဝတဲ့ နည်းပြ ဖြစ်ပြီး ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ဆုဖလားတွေ ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က အုပ်စုကနေ ထွက်ခွာ ခဲ့ရပေမယ့် နောက်တဆင့် အတွက် အတော် နီးစပ်ခဲ့ပါတယ်။ အလီဟာ နောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာ ကြီးကြယ်တဲ့ ကာကွယ်မှု လုပ်နိုင်ခဲ့လို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ ဒါကို မှတ်မိနေမှာပါ။ ဒါဟာ အရမ်းကို ခံစားချက်တွေ ပြင်းထန် နေမှာပါ။ သေချပါတယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်​။
နာပိုလီ ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ချန်​ပီယံလိဂ်​ အုပ်​စုအဆင့်​ မဲခွဲမှုမှာ ကံ​ကောင်းခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘဲ လီ​ဗာပူး ၊ ပီအက်​ဂျီ ၊ ရက်​စတားဘဲလ်​ဂရိတ်​ တို့နဲ့အတူ ကျ​ရောက်​ ​နေခဲ့ပါတယ်​။ နာပိုလီ ဟာ အုပ်​စုမှာ ရမှတ်​ ၉ မှတ်​ ရယူနိုင်​ခဲ့​ပြီး လီ​ဗာပူး ကို အိမ်​ကွင်းမှာ ၁-၀ နဲ့ အနိုင်​ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲလည်း ပါဝင်​ ခဲ့​ပေမယ့်​ အုပ်​စု​နောက်​ဆုံး ပွဲမှာ လီဗာပူးကို အန်​ဖီးမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမ့်​ခဲ့ကာ ဂိုးကွားခြားချက်​နဲ့ ပြိုင်​ပွဲက​နေ ထွက်​ခွာ ခဲ့ရပါတယ်​။
လီ​ဗာပူးနဲ့ ခနျြ​ပီယံမှာ ​ရစေကျ​ပွနျ​ဆုံ​နတေဲ့ အ​ပျေါ မှတျ​ခကျြ​ပေးလိုကျ​တဲ့ အနျ​ဆယျ​​လော့တီ​ ၊ ကူလီဘာလီ နဲ့ ဂူလမျ​
မနျ​​နဂြော ကာလိုအနျ​ဆယျ​​လော့တီက နာပိုလီ အတှကျ​ ဒီရာသီ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ draw ဟာ မနှဈ​ကထကျ​ စာရငျ​​တော့ ပို​ကောငျးတယျ​လို့ ဝနျ​ခံလိုကျ​​ပမေယျ့​ ဒီရာသီ ကလညျး ခကျ​ခဲတဲ့ အုပျ​စုအဖွဈ​ ရှိ​နဆေဲလို့ ဆိုလိုကျ​ပါတယျ​။ ​နပေယျ​ကလပျ​ဟာ ဒီနှဈ​မှာလညျး ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ဖလားဆုရှငျ​ လီ​ဗာပူး အသငျးနဲ့ အုပျ​စုအဆငျ့​မှာ ပွနျ​လညျ​​တှဆေုံ့​နပွေီး ဒီတဈ​ကွိမျ​မှာ​တော့ သွစတီးယား ကလပျ​ ရကျ​ဘူးဆဲလျ​ဘတျ​ ၊ ဘယျ​ဂြီယံကလပျ​ ဂနျ့​ တို့ ပါဝငျ​​နပေါတယျ​။
အနျ​ဆယျ​​လော့တီ​ က “ဒီတဈ​ကွိမျ​ မဲခှဲမှုဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈ​ကထကျ​​တော့ ပို​ကောငျးပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ ဒါဟာ ခကျ​ခဲတဲ့ အုပျ​စု အဖွဈ​ ရှိ​နဆေဲပါ။ ကြှနျ​​တျော​တို့ ယုံကွညျ​မှု ရှိပါတယျ​။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
နာပိုလီ ​နောကျ​ခံလူ ကာလီဒူ ကူလီဘာလီ နဲ့ ဖာအိုဇီဂူလမျ​ တို့က သူတို့ဟာ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ အုပျ​စု E က​နေ ​နောကျ​တဆငျ့​ကို တကျ​​ရောကျ​ဖို့ အတှကျ​ ခကျ​ခဲတဲ့ စိနျ​​ချေါမှုနဲ့ ရငျ​ဆိုငျ​​နရေတယျ​လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။ ကူလီဘာလီ ဟာ သူ့ရဲ့ အသငျး​ဟောငျးနဲ့ ပွနျ​လညျ​ ဆုံ​တှေ ရမှာ ဖွဈ​သလို လီ​ဗာပူး နဲ့လညျး အုပျ​စု အဆငျ့​မှာ ၂နှဈ​ဆကျ​တိုကျ​ အတူတူကြ​နပေါတယျ​။
လီ​ဗာပူး နဲ့ လာမညျ့​ စကျ​တငျ​ဘာလ ၁၇ရကျ​​နေ့ ​နပေယျ​မှာ ကစားရမယျ့​ ပှဲမတိုငျ​မီ ကူလီဘာလီ နဲ့ ဂူလမျ​တို့က နာပိုလီဟာ အဆငျ​သငျ့​ ဖွဈ​​နမှော ဖွဈ​ပွီိး ဘယျ​ပွိုငျ​ဘကျ​ကိုမှ မ​ကွောကျ​ဘူးလို့ ကွုံးဝါးလိုကျ​ပါတယျ​။
ဂူလမျ​က “ခကျ​ခဲတဲ့ ပွိုငျ​ဘကျ​​တှပေါ။ ကြှနျ​​တျော​တို့ သူတို့ကို ​လေးစားမှု အပွညျ့​နဲ့ ယှဉျ​ပွိုငျ​သှားမှာ ဖွဈ​​ပမေယျ့​လညျး ​ကွောကျ​ရှံ့​နမှော​တော့ မဟုတျ​ပါဘူး။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
ကူလီဘာလီ က ” ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ပွိုငျ​ပှဲဟာ တကယျ့​ကို အနှိုငျးမဲ့ ပွိုငျ​ပှဲ တဈ​ခုပါပဲ။ ခကျ​ခဲတဲ့ ပွိုငျ​ဘကျ​ အသငျး​တှကေ ကြှနျ​​တျော​တို့ကို ​စောငျ့​​မြှျော​​နကွေ ပါတယျ​။ ဒါ​ပမေယျ့​ ကြှနျ​​တျော​တို့ ဒီအသငျး ​တှနေဲ့ ရငျ​ဆိုငျ​သှားဖို့ အတှကျ​ အဆငျ​သငျ့​ ဖွဈ​​နမှော ဖွဈ​ပါတယျ​။ ကြှနျ​​တျော့​ရဲ့ အသငျး​ဟောငျး ဖွဈ​တဲ့ ဂနျ့​နဲ့ ပွနျ​လညျ​ ဆုံ​တှရေ့​တော့မှာ ဖွဈ​တာ​ကွောငျ့​ ကြှနျ​​တျော့​ အတှကျ​ က​တော့ တကယျ့​ကို စိတျ​လှုပျ​ရှား စရာ ပါပဲ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ​။
လီ​ဗာပူး မနျ​​နဂြော ယာဂနျ​က​လော့ က​တော့ နာပိုလီ နဲ့ ပွနျ​​တှတေဲ့ အ​ပျေါ “နာပိုလီ ထပျတှပွေ့နျပါပွီ! ကြှနျတျောတို့ နာပိုလီနဲ့ ဘယျနှဈကွိမျလောကျ ကစားခဲ့ပွီးပွီးလဲ ဆိုတာ မသိတော့ပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ အရမျးကို အတှအေ့ကွုံ ရှိတဲ့ အသငျးဆိုတာတော့ အမှနျပါပဲ။
နာပိုလီ ဟာ တကယျ့ကို ကောငျးတဲ့ အသငျးပါ။ သူတို့နဲ့ အိမျကှငျးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲဟာ ကြှနျတျောတို့ အကောငျးဆုံး ကစား နိုငျခဲ့တဲ့ ပှဲတှထေဲက တဈပှဲ ပါပဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ အရမျးကို မာကြောလှနျးလို့ပါ။ ပွီးတော့ တနျပွနျတိုကျစဈ အရမျးကောငျးတဲ့ သူတို့ကို ဂိုးလုံးဝ ပေးလို့မရတဲ့ အနအေထားလညျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကစားပုံက ရှငျးလငျးပွီး တကယျကောငျးပါတယျ။ ရာသီကွိုမှာတုနျးက ကြှနျတျောတို့ သူတို့ကို ၅-၀ နဲ့ ဒပျဗလငျမှာ နိုငျခဲ့တဲ့ အခြိနျမှာ ကြှနျတျော ဒီရလဒျကို သိပျစိတျမဝငျစား ခဲ့ပါဘူး။ အခုဆိုရငျ ဒီနှဈ ရာသီကွိုမှာ ကြှနျတျောတို့ ၃-၀ နဲ့ ရှုံးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကလညျး သိပျပွီး စိတျဝငျစားဖို့ မကောငျးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ ဘယျလောကျ ကောငျးသလဲဆိုတာကိုတော့ တှခေဲ့ ရမှာပါ။
သူတို့ဟာ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အသငျး မဟုတျသလို ကြှနျတျောတို့လညျး ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ တကယျကောငျးတဲ့ အသငျးပါ။ ကာလိုဟာ တကယျ့ကို အတှအေ့ကွုံ ကွှယျဝတဲ့ နညျးပွ ဖွဈပွီး ဒီပွိုငျပှဲမှာ ဆုဖလားတှေ ရခဲ့ဖူးပါတယျ။ သူတို့ ပွီးခဲ့တဲ့ နှဈက အုပျစုကနေ ထှကျခှာ ခဲ့ရပမေယျ့ နောကျတဆငျ့ အတှကျ အတျော နီးစပျခဲ့ပါတယျ။ အလီဟာ နောကျဆုံးစက်ကနျ့မှာ ကွီးကွယျတဲ့ ကာကှယျမှု လုပျနျိုငျခဲ့လို့ပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ သူတို့ ဒါကို မှတျမိနမှောပါ။ ဒါဟာ အရမျးကို ခံစားခကျြတှေ ပွငျးထနျ နမှောပါ။ သခေပြါတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ​။
နာပိုလီ ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ အုပျ​စုအဆငျ့​ မဲခှဲမှုမှာ ကံ​ကောငျးခဲ့ခွငျး မရှိခဲ့ဘဲ လီ​ဗာပူး ၊ ပီအကျ​ဂြီ ၊ ရကျ​စတားဘဲလျ​ဂရိတျ​ တို့နဲ့အတူ ကြ​ရောကျ​ ​နခေဲ့ပါတယျ​။ နာပိုလီ ဟာ အုပျ​စုမှာ ရမှတျ​ ၉ မှတျ​ ရယူနိုငျ​ခဲ့​ပွီး လီ​ဗာပူး ကို အိမျ​ကှငျးမှာ ၁-၀ နဲ့ အနိုငျ​ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲလညျး ပါဝငျ​ ခဲ့​ပမေယျ့​ အုပျ​စု​နောကျ​ဆုံး ပှဲမှာ လီဗာပူးကို အနျ​ဖီးမှာ ၁-၀ နဲ့ ရှုံးနိမျ့​ခဲ့ကာ ဂိုးကှားခွားခကျြ​နဲ့ ပွိုငျ​ပှဲက​နေ ထှကျ​ခှာ ခဲ့ရပါတယျ​။